Liiska Wadamada Ugu awooda badan dhinaca Milatariga oo la shaaciyay iyo Soomaaliya oo… | Somalia News
Liiska Wadamada Ugu awooda badan dhinaca Milatariga oo la shaaciyay iyo Soomaaliya oo…
Sanad walbo waxaa lasoo bandhigaa liiska Wadamada ugu awooda badan dhinaca milatariga, waxaana inta badan lagu qiimeeyaa awooda milatariga dhinaca hubka, tirada iyo sidoo kale dhaqaalaha lagu bixiyo ciidankaasi.
Wargeyska Global Firepower, ayaa sanad kasta soo bandhiga qiimeynta 138-wadan ee ugu awooda badan ee dhinaca milatariga, waxaana inta badan isbadal ku imaan shanta wadan ee ugu horeeya dhanka milatariga.
Dowladaha Mareykanka, Ruushka, Shiinaha iyo Hindiya ayaa safka hore kaga jira wadamada ugu awooda badan milatariga, wadamadan ayaana sanad kasta hogaamiya wadamada ugu awooda badan milatariga.
Turkiga oo kamid ahaa sanadihii ugu dambeeyay 10-ka wadan ee ugu awooda badan dhinaca milatariga ayaa sanadkan hoos ugu dhacay kaalinta 11-aad, waxaana sanadkan 10-ka wadan ee ugu awooda badan milatariga soo gashay dowlada Masar.
Milatariga Sacuudiga ayaa sidoo kale sanadkan ka sara maray milatariga Isra’il oo horey uga horeeyay, waxaana milatariga Sacuudiga sanadkan soo galay kaalinta 17-aad halka Israa’il gashay 18-aad.
Soomaaliya oo dib u dhis ku wada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa qiimeynta sanadkan kasoo gashay kaalinta 136, waxa ayna Soomaaliya dhinaca milatariga uga saro martay wadamada Liberia iyo Bhutan.
Halkan ka Akhriso 25-ka wadan ee ugu awooda badan dhinaca Milatariga Caalamka
6- Kuuriyada Koonfureed
17- Sacuudi Carabiya
25- Kuuriyada Waqooyi
This post first appeared on Allbanaadir.com. Read the https://www.allbanaadir.org/?p=165828original article
Previous articleShaxda Laga Yaabo In Ay Liverpool Kaga hor tagto Lincoln City
Next articleAkhriso: C/wali Gaas oo labo Arrin oo muhiim ah ka dalbaday R/wasaaraha cusub